မြန်မာနက် Home » မြန်မာနက် | Myanmar Net NEWS
Download Myanmar Net app
မြန်မာနက် | Myanmar Net NEWS
ဂူဂဲလုပ်ငန်းခွင် ခေါ် Google Workspace ဆိုတာဘာလဲ?
By webmaster14-Mar-2022 - Read Time: 1 minute
ယောကျာ်းအင်္ဂါနှင့်တူသော ရှားပါးပင်များအား မခူးကြရန် ကမ္ဘောဒီးယားက အသိပေး ကြေညာ
By webmaster30-May-2022 - Read Time:3minutes
By newsmaster30-Jun-2022 - Read Time: 1 minute
By editor30-Jun-2022 - Read Time:2minutes
အမေရိကန်နိုင်ငံသား5ယောက်မှာ 1 ယောက်လောက်က ကျေးလက်ဒေသမှာ နေထိုင်ကြပြီး မြို့တွေအနီးမှာ နေထိုင်သူတွေလို စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကျေးလက်ဒေသရှိ အမေရိကန်များသည် အခြားသူများကဲ့သို့...
Throwaway Joke သည် ဆုရရှိသော ကြော်ငြာကမ်ပိန်းတစ်ခု မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်
By newsmaster30-Jun-2022 - Read Time:2minutes
ကျွန်ုပ်တို့၏ ‘Creative Conversations in Advertising’ စီးရီးတွင် Goodby Silverstein & Partners မှ Creative Directors Tristan Graham နှင့်...
ဇူလိုင်/သြဂုတ်လအတွက် OBJ ၏ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်၏ နောက်ကွယ်မှ။ 2022 စာစောင်
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်နာပါ- https://www.facebook.com/EntMagazine/ https://www.instagram.com/entrepreneur Tweets by Entrepreneur https://www.instagram.com/entrepreneur/ Snapchat: entmagazine
By editor30-Jun-2022 - Read Time: 1 minute
ဆောင်းပါးကို ဝေမျှရန်ရှင်းလင်းချက် – ဖော်ပြပါ ရွှေဈေးနှုန်းများမှာ ကိုးကားမှီငြမ်းရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ဖတ်ရှုပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အားထားဆုံးဖြတ်ရန် မသင့်။ မိန့်ခွန်းများမှာ မိန့်ကြားမှုများရှိနိုင်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သော နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများကို ကိုယ်စားမပြုသည်များလည်း ရှိ၊...
သေခြင်းအကြောင်း ကျီးကန်းတွေက ငါတို့ကို ဘာသင်ပေးတယ် – Kaeli Swift #shorts #tedx
တိရိစ္ဆာန်အမူအကျင့်ပညာရှင် Kaeli Swift သည် ကျီးကန်းများ၏ဘဝ (နှင့်သေခြင်း) အလေ့အထကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ပြနိုင်သည့်အရာများကို မျှဝေသည်။ ဟောပြောချက်အပြည့်အစုံကို ဒီမှာကြည့်ပါ- https://youtu.be/cWuonbnOeBg...
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နည်း | Marybeth Shinn | TEDxNashvilleSalon
အိုးအိမ်မဲ့ခြင်းသည် အိမ်ယာပြဿနာဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိဖို့ပဲ လိုတယ်။ Marybeth Shinn သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ တားဆီးရန်နှင့် အဆုံးသတ်ရန် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖယ်ကျဉ်ခြင်းကို...
လက်ကို မြင့်တင်ခြင်း | Zuriel Oduwole | TEDxBerkeley
Zuriel Oduwole သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာ့ရေးရာများတွင် အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ Zuriel Oduwole သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်အငယ်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူအဖြစ် မကြာခဏ ဖော်ပြခံရပြီး သူမ၏...
ဗီဒီယို။ ဝမ် 3500 သာ ပေးရသည့် လက်လုပ် ဟင်းချိုမှ ဝမ် 1,500 မှ တစ်နေ့ ပန်းကန် 1,000 ရောင်းသည့် ခေါက်ဆွဲ 1,500 အထိ။ ခေါက်ဆွဲဗီဒီယိုများကြည့်ရန်┃Best5 ခေါက်ဆွဲ/ကိုရီးယားလမ်းဘေးအစားအစာ – ကိုရီးယားချက်နည်း
😋 ဝမ် 3500 သာ ပေးသော sujebi မှ ဝမ် 1,500 မှ 1,500 ခွက်အထိ တစ်နေ့ ပန်းကန် 1,000 ရောင်းသည်။...
ဗီဒီယို။ Most Korean American Beef Dishes (Bone Ribs) – ကိုရီးယားချက်နည်း
Posted on: 2022. 6. 29 အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ~ ငါ Pong Shem ပါ။ ဒီည ညစာအတွက် အသားစားချင်ပါသလား။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ ဝက်သားဝမ်း၊...
ဗီဒီယို။ Earl Grey High Ball သည် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အကျော်ကြားဆုံးသော အမျိုးသား စောင့်ဆိုင်းစာရင်းဖြစ်သည့် #Nahonsan #shorts – ကားချက်နည်း
Earl Grey Highball ချက်နည်း ယခု။ 👉 https://wcuisine.app.link/aokE2mh0erb တွင် သွားကြည့်ပါ။
1757 – အလောင်းမင်းတြားကိုင်ခဲ့တဲ့ Blunderbusses pistol ကြေးဝါသေနတ် နဲ့ မြန်မာပြည်ကို #Buraghmah / ဗရဟ်မာ (ဗြဟ္မာ) လို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထား
By webmaster14-Oct-2021 - Read Time:5minutes
၁၇၅၇ ရွှေဘိုမြို့ အလောင်းမင်းတြားကိုင်ခဲ့တဲ့ Blunderbusses pistol ကြေးဝါသေနတ် နဲ့ မြန်မာပြည်ကို #Buraghmah / ဗရဟ်မာ (ဗြဟ္မာ) လို့ ခေါ်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထား . ဟုတ်ပါတယ်။...
1878 – သီပေါမင်းသား၏ နန်းသိမ်းမိန့်
By webmaster14-Oct-2021 - Read Time:2minutes
၁-၁၀-၁၈၇၈ မန္တလေး မန္တလေးမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅၀ လောက်က အာဏာသိမ်း/ နန်းသိမ်းကျေညာခဲ့ပုံ အခုအချိန်နဲ့ ဗရုတ်သုတ်ခနဲ့ သိပ်မကွာသလိုဘဲခင်ဗျ။ အများပြည်သူက ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို အဖြစ်မှန် မသိခဲ့ကြတာ။ ....
အားတစ်ခါသွင်းပြီးရင် မိုင် ၁၀၀၀ မောင်းနိုင်တဲ့ Aptera motor ရဲ့လျှပ်စစ်ကား
By editor30-Dec-2020 - Read Time:2minutes
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်လောက်တုန်းက Aptera ကုမ္ပဏီဟာ ဘီးလေးဘီးအစား ဘီး၃ဘီးပါတဲ့လျှပ်စစ်ကားကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လို့ ရန်ပုံငွေရှာရမှာ ကျရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ Aptera 2e ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ဒေါ်လာသန်း...
By editor23-Dec-2020 - Read Time:2minutes
Googleမှ ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း Gmail, Drive နှင့်အခြား Workspace အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကိစ္စနှင့်ပက်သက်လို့ googleမှ ရှင်းလင်းချက်အပြည့်အစုံနှင့် အနာဂတ်မှာယခုလိုဖြစ်ပျက်မှုများကိုကာကွယ်သွားမည့်​အဆင့်များကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာမှာ Google အကောင့် authentication စနစ်နှင့်ပက်သက်လို့...
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှစပြီး ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ယာဉ်များကို တားမြစ်မည်
By editor18-Nov-2020 - Read Time:2minutes
၂၀၃၀ခုနှစ်တွင်’အစိမ်းရောင်စက်မှုတော်လှန်ရေး’လှုပ်ရှားမှုအရ ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်ကားများရောင်းချမှုကိုပိတ်ပင်လိမ့်မည်ဟု Boris Johnson ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သို့သော်မော်တော်ကားကျွမ်းကျင်သူများကလျှပ်စစ်ကားအားသွင်းကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့ရန်အကြိမ် ၂၀နီးပါးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ UK နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ အိမ်များ၊ လမ်းများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမများတွင် လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်လျှပ်စစ်အားသွင်းနိုင်သောနေရာများ(charging point)များတည်ဆောက်ရန် စတာလင်ပေါင် ၁.၃ ဘီလီယံကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့အစိုးရမှကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနရဲ့...
Georgiaမှာကျင်းပတဲ့ ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အတွက်ယှဥ်ပြိုင်မှုမှ နိုင်ငံရေးအရကြော်ငြာခြင်းကို Facebook နှင့် Googleမှပိတ်ပင်သောကြောင့်ဝေဖန်ခံရ
By editor12-Nov-2020 - Read Time:2minutes
facebookမှ သူ၏နိုင်ံရေးကြော်ငြာများအပေါ်တားမြစ်ခြင်းက ယာယီသာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲတွင်စိတ်ချရဖို့အတွက်ကူညီခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးသတင်းမှားများပျံ့နှံမှုကိုကာကွယ်ရန်နိုင်ငံရေးကြော်ငြာများကိုပိတ်ပင်တာဖြစ်ပေမယ့်လို့ Georgiaနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ကိုအုပ်ချုပ်မည့်သူအတွက်ရွေးကောက်ပွဲမတင်ခင် ဝေဖန်သံများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Facebook ရဲ့ ကနဦးပြောကြားချက်အရ တားမြစ်ခိက်က အကန့်အသတ်မရှိဟုဆိုသော်လည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တားမြစ်ချက်ကို နောက်လအထိဆက်ရှိမည်လို့ ဘလော့၁ခုမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ‘မှားယွင်းသောသတင်း’ ကိုတွန်းလှန်ရန်ခုခံကာကွယ်ခဲ့သည်
By editor30-Jun-2020 - Read Time:3minutes
ကြော်ငြာခြင်းသပိတ်မှောက်မှုကြောင့်သတင်းအမှားများကိုလူများအားရှာဖွေတွေ့ရှိရန် Facebook မှစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုစတင်လိုက်ခြင်းသည်သတင်းမှားများနှင့်အမုန်းစကားများကိုကုမ္ပဏီအားဖိအားပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိက၏ဥရောပဒုတိယဥက္ကpresident္ဌစတိဗ်ဟတ်ခ်ျကသတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးသူများ FullFact နှင့်စတင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီသည်ကုမ္ပဏီသည်နားထောင်ခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၏သာဓကဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဝေဖန်သူများကမူဗြိတိန်၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်ကြိုးစားမှုသည်အလွန်နည်းလွန်းပြီးနောက်ကျသည်ဟုဆိုကြသည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသည်လူများအား StampOutFalseNews.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းပေါ်၌တွေ့ရသည့်အဓိကအကြောင်းအရာများ – “ဘယ်ကလဲ” “ဘာပျောက်နေတာလဲ”...
YouTube တွင်ထင်ရှားသောအဖြူ supremacist လိုင်းများကိုပိတ်ပင်ထားသည်
အင်တာနက်ကုမ္ပဏီများမှလူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသောကြောင့် YouTube သည်ထင်ရှားသောအဖြူ supremacist လမ်းကြောင်းအချို့ကိုပိတ်ပင်ထားသည်။ ဂူဂဲလ်ပိုင်ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းကမုန်းတီးရေးမိန့်ခွန်းကိုတားမြစ်သည့်၎င်း၏မူဝါဒများကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုပြောသည်။ မကြာသေးမီရက်များအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်အဓိကကြော်ငြာရှင်များကသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြသည်။ တနင်္လာနေ့တွင် Ford သည်ဇူလိုင်လအတွင်းတွင်လူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများကိုရပ်တန့်စေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်များစာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ YouTube တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကြေငြာချက်တစ်ခုအရ“ ကျွန်ုပ်တို့တွင် YouTube ၌အမုန်းစကားပြောခွင့်ကိုတားမြစ်သည့်တင်းကြပ်သောမူဝါဒများရှိသည်၊ ထိုမူဝါဒများကိုထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်စေ၊...
TikTok က iPhone clipboard အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့
By editor30-Jun-2020 - Read Time: 1 minute
လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်း TikTok က Apple iPhone clipboard မှ အချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းမရှိကြောင်း ဘီဘီစီကို ပြောကြားခဲ့သည်။ iOS 14 ၏ operating system အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်...
အမေရိကန်ဖုန်းကုမ္ပဏီ Verizon သည် Facebook ကြော်ငြာသပိတ်မှောက်မှုတွင်ပါဝင်သည်
By editor26-Jun-2020 - Read Time:3minutes
အမေရိကန်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ Verizon သည် Facebook platform များမှကြော်ငြာများကိုဆွဲဆောင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။၎င်းကုမ္ပဏီသည် Ben နှင့် Jerry’s တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီးအြငင်းပွားဖွယ် ရာထူးများကို ကိုင်တွယ်ရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများကို သပိတ်မှောက်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင်...
ဆင်ရန်ပုံငွေရှာရန် Elephant in Zoom အစီစဥ်ပြုလုပ်
By editor07-Nov-2020 - Read Time:2minutes
Covid-19 ​ရဲ့ရိုက်ခတ်မှု​ဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုများစွာထိခိုက်သဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိဆင်စခန်း ၈၅ ခုအားပိတ်ပစ်ရန်သတင်းများအရသိရပါတယ်။ ဤအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် zoom app ဖြင့် video call အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ရန်ပုံငွေရှာရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အစီစဥ်နာမည်ကိုလည်း Elephant in...
By webmaster02-Nov-2020 - Read Time:2minutes
(CNN) – Lufthansa ဘိုးအင်း (၇၄၇-၄၀၀) ခြောက်စီးသည်နွေရာသီတွင်တိုင်းပြည်၏အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိဒတ်ခ်ျလေကြောင်းအချက်အချာနေရာဖြစ်သော Twente လေဆိပ်သို့ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုအပြီးတွင်ဂျာမန်လေကြောင်းလိုင်း၏လေယာဉ်ပျံသန်းမှုလျှော့ချမှုကြောင့်လေယာဉ်သည်ပျက်ကျခဲ့ပြီးဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လများအတွင်း Twente သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လေယာဉ်များသည်လေဆိပ်၏လေယာဉ်ကွင်းသို့ရောက်သောအခါဖြိုဖျက်ရန်သွားနေကြသည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ သေချာသည်မှာလေယာဉ်ခြောက်စင်းမှငါးကောင်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Mojave လေဆိပ်အခြေစိုက်...
အီတလီကျေးရွာသည်စွန့်ပစ်ထားသောအိမ်များကိုယူရို ၁ ဖြင့်လေလံတင်
By webmaster26-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အိမ်များကိုရောင်းချရန်စီစဉ်နေသည့်အထဲတွင်အီတလီ၏ရုန်းကန်နေရသောကျေးရွာများသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ္စလီကျွန်း၏သာယာလှပသော Salemi ရွာသည်အိမ်ခြံမြေဟောင်းများကို espresso စျေးနှုန်းထက်နည်းသောဈေးအသက်သာဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။လာမည့်လများအတွင်းအိမ်များပြိုလဲနေသောအိမ်များသည်ယူရိုငွေတစ်ဒေါ်လာနှင့်အထက်ဈေးနှုန်းဖြင့်လေလံတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။မြို့တော်ဝန် Domenico Venuti သည်၎င်းအစီအစဉ်သည် Salemi ကိုဘဝအသစ်တစ်ခုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ထားပြီး ဆာလီမီသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်စစ္စလီကျွန်းရှိ Belice ချိုင့်ဝှမ်းကိုလှုပ်ခတ်စေသောပြင်းထန်သောငလျင်ကြောင့်လူ ဦး...
By webmaster19-Oct-2020 - Read Time:2minutes
(CNN) – အနံ့ဆိုးပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုမျိုးအရသာရှိမလဲ။ ဒီနှစ်မှာတော့ဒီနှစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လာတဲ့မေးခွန်းပဲ ။Anosmia – ဒါမှမဟုတ် “blind blindness” ဆိုတာက ၅ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ လူ ဦး ရေ။ သို့သော်အနံ့နှင့်...
Covid-19ကြောင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုပိတ်ထားရချိန်တွင်အဘယ်ကြောင့် Michelin ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည်အရေးပါနေသလဲ
By webmaster15-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်မကြာသေးမီကဂုဏ်ပြုမှုများသည်အချက်အပြုတ်အနုပညာအထွတ်အထိပ်ကိုကိုယ် စားပြုပြီးပြင်သစ်ထိုင်းကုမ္ပဏီကြီး Michelin ၏အဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။သို့သော်ယခုအချိန်သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းဧ ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခက်ခဲသောကာလဖြစ်ပြီး သောင်းနှင့်ချီသောစားသောက်ဆိုင်များပိတ်ထားရကာထောင်နှင့်ချီသောလူများကိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြသည်။ ယခုနှစ်ထူးခြားသောအခြေအနေများကြောင့်အခြားဂုဏ်ပြုဆုများသည်လည်းလှုပ်ရှားမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သည်။Covid-19 သည်ယခုနှစ်တွင်စားသောက်ဆိုင်နှင့်စားဖိုမှူးအမျိုးအစားများတွင်အချက်အချာကျသောအောင်မြင်မှု၏အမှတ်အသားဖြစ်သောဂျိမ်းစ်မုတ်ဆိတ်ဆုပေးပွဲအားဖျက်သိမ်းရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း၏လက်ရှိအခြေအနေအရအဘယ်ကြောင့် Michelin သည်စားသောက်ဆိုင်များကိုသုတေသနပြုရန်နှင့်ကြယ်ပွင့်ဆုများရရှိရန်ဆက်လက်စားသောက်နေသနည်း။ မရေရာမသေချာမရေရာမှုနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုများရှိနေသည့်အချိန်တွင်သံ သယဖြစ်ဖွယ်ကြယ်များသည်သူတို့တစ်ချိန်ကကျော်ကြားခဲ့သောအရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေကြသလားဟူသောမေးခွန်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။လမ်းညွှန်၏နိုင်ငံတကာဒါရိုက်တာ Gwendal Poullennec...
By webmaster13-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
အာဖရိက၏အနောက်မြောက်တွင်ရှိသည့်ဂါနာသည်အမြဲအသစ်တီထွင်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရောင်စုံယဉ်ကျေးမှု၊ တောရိုင်းတောရိုင်းနှင့်သဘာဝအလှအပတို့ကြောင့်ကျော်ကြားသောအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံသည်ဆာဟာရတောင်ပိုင်းအာဖရိက ၏ အ လျင်အမြန်တိုးတက်နေသောစီးပွားရေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကိုကိုးနှင့်လတ်တလောရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုခဲ့ပြီး အနုပညာနှင့်ဖက်ရှင်မြင်ကွင်းတွင်ဘဝအသစ်တစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲများပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ ဂါနာနိုင်ငံ၏ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုဒဏ်ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိသော်လည်းတိုင်းပြည်သည်ယခင်ကကဲ့သို့ဂရုစိုက်စရာကောင်းသောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနိုင်ငံတကာဟိုတယ်အမှတ်တံဆိပ်အနည်းငယ်အားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်ခရီးသွားလာခြင်းကန့် သတ်ချက်များကြောင့်ထိုသို့မပြုလုပ်နိုင်မီအချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်နိုင်သော်လည်းခရီးသည်များအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့်အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပေ။ တေဆင်ာရိုင်းများနှင့်အတူဂါနာသို့သွားလည်ပတ်ရာတွင်ထိပ်တန်းအရာရှိအချို့ရှိသည်။ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ်နေရာဖြစ်သည့် Cape Coast...
ဗင်းနစ်သည်နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀ အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရေကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သည်
By webmaster05-Oct-2020 - Read Time:2minutes
ဗင်းနစ်၊ အီတလီ (စီအန်အန်) – Sebastian Fagarazzi သည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်ရာများကိုရွေ့လျားရာတွင်အသုံးပြုသည်။ မြေညီထပ်တွင်နေထိုင်နေသောဗင်းနစ်သမားတစ် ဦး အနေဖြင့်မြို့တော်သည်ဒီရေမြင့်တက်ခြင်းကြောင့်ပုံမှန်ရေကြီးမှုကိုကြုံတွေ့ရသည့်အခါတိုင်းသူသည်ပရိဘောဂနှင့်အသုံးအဆောင်များအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုမြှင့်တင်ရမည်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ ၁၃၅ စင်တီမီတာ (၅၃ လက်မ)...
ကြီးမားသောအချည်းနှီးသော ‘တစ္ဆေ’ သင်္ဘောသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုဆွဲဆောင်သည်
By webmaster01-Sep-2020 - Read Time:2minutes
(CNN) – ယူကေ၏အနောက်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှအင်္ဂလိပ်ရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ပြီးမမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်မြင်ရလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ခရီးသည်တွေပျောက်သွားပြီးဘယ်နေရာကိုမှမသွားဘူး။ coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုမယူသောဤသင်္ဘောများသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအားသယ်ဆောင်လာခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသူတို့ဖန်တီးထားသောကျဉ်းမြောင်းသောမျက်မှောက်ခေတ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသေးစားခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ generated ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ၂၇ နှစ်ကြာရေယာဉ်များစီးနင်းလိုက်ပါလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် P&O Cruises အတွက်ဒုတိယကပ္ပတိန်အဖြစ်ကမ္ဘာကိုခရီးသွားလာသည်။ ယခု Mudeford...
အသစ်ထပ်ထုတ်သည့် Microsoft Flight Simulator 2020 သည် အိမ်တွင်းအောင်းသူများအတွက် ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်
By webmaster10-Aug-2020 - Read Time: 1 minute
Avgeek desktop gamers နှင့် Wannabe လေကြောင်းမှူးတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့အလိုရှိသောအမြင့်နှုန်းအားရရှိနိုင်ခဲ့ သည်။ရှည်လျားသောဆောင်းတွင်းကာလပြီးနောက် ဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့တွင် တရားဝင်ရရှိနိုင်သည့် ပြန်လည်စတင်ခဲ့သော Microsoft Flight Simulatorသည် ကူးစက်ရောဂါများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုများအတွက် အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သည်။Flight Simulator...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလူကြိုက်များလာတဲ့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့သရေစာမုန့်Bubble waffles
By webmaster01-Aug-2020 - Read Time:2minutes
မြို့တစ်မြို့လုံးတွင်တွေ့ရသောထင်သာမြင်သာသောစျေးပေါသောလမ်းပေါ်မှအစားအစာများသည်ဤအစာများသည်အပြင်ဘက်တွင်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရှိနေပြီး “ပူဖောင်း” တစ်ခုစီသည်အတွင်းပိုင်းတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ Cantonese တွင် “gai daan jai” ဟုခေါ်သောသူတို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကွတ်ကီးနှင့်ရေမြှုပ်ကိတ်စပ်စပ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ Kowloon ရှိရှန်ဟိုင်းလမ်းကိုကျွန်တော်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များနှင့်ပြည့်နေပြီး၎င်းသည်ပူဖောင်း waffle iron များ ၀...
Bitcoin သည် လေးပတ်ကြာမြင့်ပြီး ether သည် သုံးပတ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
By editor08-Feb-2022 - Read Time: 1 minute
နယူးယော့ခ် : Bitcoin သည် တနင်္လာနေ့တွင် လေးပတ်ကြာ အထွတ်အထိပ်သို့ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး၊ အချို့သော ရာထူးတိုတိုများ ဖျက်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများကြောင့် တနင်္လာနေ့တွင် Bitcoin သည်...
Nissan သည် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်အသစ်များ တီထွင်မှုအများစုကို ရပ်တန့်ရန် Nikkei
Nissan Motor Co သည် United States မှလွဲ၍ ၎င်း၏အဓိကစျေးကွက်များအားလုံးတွင် အတွင်းလောင်ကျွမ်းမှုအင်ဂျင်အသစ်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် စီစဉ်နေပြီး လျှပ်စစ်ကားများထုတ်လုပ်ရန် အာရုံစိုက်နေကြောင်း Nikkei လုပ်ငန်းနေ့စဉ်သတင်းစာက...
COVID-19 ကပ်ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ NTUC ၏ e2i မှ အလုပ်သမား ၄၆,၀၀၀ ကျော်သည် အလုပ်နေရာချထားပေးမှု အကူအညီကို ရရှိခဲ့သည်။
By editor08-Feb-2022 - Read Time:3minutes
စင်္ကာပူ – COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အလုပ်သမား ၄၆,၀၀၀ ကျော်သည် National Trades Union Congress’ (NTUC) Employment and Employability...
တိုကျို ၂၀၂၀ တွင်သမ္မတမော်ရီသည်လိင်အရအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့
By editor11-Feb-2021 - Read Time: 1 minute
Yoshiro Mori သည်တိုကျို ၂၀၂၀ အိုလံပစ်စည်းရုံးရေးကော်မတီဥက္ကဌဖြစ်ပြီး သူကစကားများသည့်အမျိုးသမီးများကို ကျားမခွဲခြားပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမှတ်ချက်များ ပြုလုပ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုပယ်ဖျက်ရန် Fuji News Network မှကြာသပတေးနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်)...
By editor02-Feb-2021 - Read Time:2minutes
တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်နယူးဂျာစီနှင့်ပဲင်စီလ်ဘေးနီးယားပြည်နယ်အချို့တွင်နှင်းထု၏ ၁၉လက်မ (၄၈ စင်တီမီတာ) နှင့်နယူးယောက်စီးတီးရှိ ၁၇ လက်မ (၄၃ စင်တီမီတာ) အထိကျဆင်းသွားပြီးဖြစ်သည်။ နယူးယောက်မြို့နှင့်နယူးဂျာစီပြည်နယ်တို့သည်အရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာနကအင်္ဂါနေ့တွင်မုန်တိုင်းမဝင်မီနယူးအင်္ဂလန်သို့တက်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်နာရီလျှင် (၅၀) မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းများသည်နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုနှင့်တိမ်တိုက်များရက်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မုန်တိုင်းသည်ဒေသတွင်းခရီးသွားခြင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့သည်။...
အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးကောက်ပွဲ မငြိမ်သက်မှုအတွက် ပြင်ဆင်
By editor02-Nov-2020 - Read Time: 1 minute
‘ငွေသားကိုငြင်းဆန်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကကျွန်တော့်ကိုအခြေခံ ၀ ယ်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး’
By editor27-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
Age UK မှပရဟိတဒါရိုက်တာကယ်ရိုလိုင်းအေဘရာဟမ်က“ သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ငွေကိုအားကိုးကြရပြီး၊ အချို့သောသူများအတွက်အခိုက်အတန့်တွင်စျေးဝယ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပင်လျှင်၊ သူတို့ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုဝယ်ပါ။ “
By editor26-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
Leonard Cheshire မှစစ်တမ်းကောက်ယူထားသောစာရင်းအရမသန်စွမ်းသူ ၁၀ ဦး လျှင် ၇ ဦး သည် Covid-19 ကြောင့်၎င်းတို့၏ ၀ င်ငွေထိခိုက်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။လှူဒါန်းမှုအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးကအစိုးရအားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာစေရန်တွန်းအားပေးရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး ကမသန်စွမ်းသူများအလုပ်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောထောက်ပံ့မှုပေးရန်ကတိက...
By editor26-Oct-2020 - Read Time:2minutes
Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှတန်ဖိုးသည် ၂.၃% ကျဆင်းခဲ့ပြီး S&P 500 သည် ၁.၈% နှင့် Nasdaq 1.6% သို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများမြင့်တက်လာသည့်အတွက် ဥရောပရှိစတော့အိတ်ချိန်များသည်လည်းကန့်သတ်မှုအသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ ခရီးသွားလုပ် ငန်းနှင့်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများမှအစုရှယ်ယာများတွင်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်ဗြိတိသျှလေ...
By editor25-Oct-2020 - Read Time: 1 minute
Think tank ၏လေ့လာသုံးသပ်သူများကယေဘုယျအားဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းမှာ Covid-19 ကန့်သတ်ချက်များနှင့်လက်လီရောင်းချခြင်း၊ အနုပညာနှင့်အပန်းဖြေခြင်းကဏ္inများတွင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ယခုအခါဗြိတိသျှခြောက်သန်းနီးပါးအတွက်ပိုမိုတင်းကြပ်သော coronavirus စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်။
Baby corn စိုက်ပျိုးနည်း
By editor24-Jan-2022 - Read Time:3minutes
baby corn ဟာ အဝါရောင်ခပ်ဖျော့ဖျော့ရှိပြီး စားလိုက်ရင် ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ စားကောင်းပါတယ်။ စည်သွပ်ဘူးတွေလည်း ရှိသလို ရိုးရိုးအလွတ် baby corn လေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထမင်းကြော်၊ အစိမ်းကြော်မှစ၍...
By editor27-Jan-2021 - Read Time:2minutes
မြန်မာအမည် – ၀ဥ ရုက္ခဗေအမည်-Amorphophallus Campanulatus အင်္ဂလိပ် အမည် -Elephant foot yam (or)white yam မူရင်းဒေသ – အရှေ့တောင် အာရှဒေသဖြစ်ပြီး...
လယ်သမားများ၏ အဓိကရုဏ်း နောက်ဆုံးသတင်းများ
By editor27-Jan-2021 - Read Time:3minutes
လယ်သမားများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုပြသရန်ရည်ရွယ်သည့်လယ်ထွန်စက်ချီတက်ပွဲသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်တွင်နိုင်ငံ၏မြို့တော်တွင် အထိကရုံးများဖြစ်ပြီး၊ Haryana အစိုးရသည်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသတိပေးမှုမြင့်မားသောအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဥပဒေကိုကိုင်စွဲသူများကိုတင်းကြပ်စွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တော်မှာ အမျိုးသားနေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားကြီး ကျင်းပနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို...
နိုကိုဥ ( KNOL RABI)စိုက်ပျိုးနည်း
နိုကိုဥဟာ နွေရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီတို့တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အေးမြသောရာသီဥတုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုကိုဥ အမည်သည် ဂျာမန်ဘာသာအရ Cabbage Turnip ဟု အဓိပ္ပါယ်ပေါ်ပါတယ်။ မူရင်းဒေသမှ ဥရောပတိုက်အနောက်ပိုင်း တိုင်းပြည်များ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျော်ကြားသော...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်း : အိန္ဒိယရဲ့ နိုင်ငံတော်နေ့အခမ်းအနားကို လွှမ်းမိုးဖို့ ဆန္ဒပြတောင်သူတွေ ထွန်စက်သပိတ်ဆင်နွှဲရန် စီစဉ်
By editor26-Jan-2021 - Read Time:2minutes
ဆန္ဒပြသူထောင်ပေါင်းများစွာသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မြို့တော်ရှိမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာဒေသတွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ တိုင်းပြည်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာဏာတည်လာသည့်နေ့ကိုရီပတ်ဘလီကန်နေ့အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထွန်စက်တွေစီးလာတဲ့ တောင်သူလယ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ အစိုးရရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆန္ဒပြဖို့အတွက် တနင်္လာနေ့က နယူးဒေလီမြို့ပြင်ပမှာ စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ ကျင်းပနေကျ...
သကြားသီး ခေါ် လေချူသီး စိုက်ပျိုးနည်း
By editor26-Jan-2021 - Read Time:3minutes
မြန်မာ အမည် – သကြားသီး ၊ လေချူသီး အင်္ဂလိပ်အမည် – Sapota , Sapodilla Plum ရုက္ခဗေဒအမည် – Manilkara zapota...
By editor25-Jan-2021 - Read Time:3minutes
မြန်မာအမည်- ကြက်မောက်သီး အင်္ဂလိပ် အမည်- RAMBUTAN ရုက္ခဗေဒ အမည်မှာ- Naphelium lappacum မျိုးရင်းအမည်မှာ-SAPINDACEAE မူရင်းဒေသ- မလေးရှားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ကြက်မောက်သီးအား ဥယျာဥ်တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သောနည်းသာမက...
အိမ်တွင် လွယ်ကူသောအဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် နံနံပင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောနည်း
By editor25-Jan-2021 - Read Time: 1 minute
နံနံပင်ဟာ (ဟိန္ဒူဘာသာတွင်“ dhaniya” ဟုလူသိများသည့်) အစားအစာတွင်သုံးသောအမွှေးအကြိုင်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောအနံ့က ဟင်းအရသာကိုတိုးပွားစေပါတယ်။ အဆင့် ၁ – နံနံစေ့များကိုကြဲပါ နံနံပင်သည်နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ကိုကြိုက်နှစိသက်ပါတယိ။ သို့သော်ပူလွန်းသည့်အခါအရိပ်အနည်းငယ်ဖြင့်သာ စိုက်ပျိူနိုင်သည်။ သတိပြုရန် မှာအပင်ဟာအပူဖြင့်ဖိအားပေးခံရလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်မျိုးစေ့ကျတတ်ပါတယ်။...
မှိုများဟာ အိမ်တွင်းကြီးထွားရန်လွယ်ကူပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလင်းမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်း သင်၏သီးနှံများကို မှိုနှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ချက်ပြုတ်နည်းများကိုအရသာဖြည့်စွက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အိမ်၌မှိုကြီးထွားရန်အဓိကသော့ချက်များမှာမှန်ကန်သောကြီးထွားမှုအခြေအနေကိုထူထောင်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေပါတယ်။ အိမ်တွင်း မှိုကြီးထွားရန်အတွက် ဤလမ်းညွှန်ချက် အဆင့်ဆင့်များကိုအသုံးပြုပါ။...
ဂျပန်နည်းဖြင့် Tofu ပြုလုပ်နိုင်သောနည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်
By editor25-Jan-2021 - Read Time:4minutes
အပူချိန်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သေချာလိုက်နာနိုင်ပါက tofu ပြုလုပ်ခြင်းဟာ မခက်ခဲပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် tofu ကိုစူပါမားကတ်သို့မဟုတ်အခြားအရင်းအမြစ်များမှ ၀ယ်ယူနေကြဆိုရင်တော့ လတ်ဆတ်တဲ့ tofuရဲ့ အရသာရှိမှုကို သင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Tofu ပြုလုပ်တဲ့အခါ ပဲနို့...
Myanmar Net intl. news
--- မှတ်ချက် ---
လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ပြည်တွင်း သတင်းဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှု ပေါ်လစီများကြောင့်၊ ပြည်တွင်းရှိ မီဒီယာတစ်ခုအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့သတင်းများသာ ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆိုင်သမျှ သတင်းများ အားလုံး ချန်လှပ်ထားခဲ့ရသည်ကို စာဖတ်သူများ စာနာနားလည်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
အားလုံးအတွက် မြန်မာနက် ©
⦿ မြန်မာနက် ⦿ အင်တာနက်လမ်းညွှန် ⦿ ဂိမ်း ⦿ သတင်း ⦿ အကျိုးဆောင် ⦿ ဗေဒင် ⦿ ဈေး ⦿ အလုပ်ရှာ ⦿ ကား ရောင်းဝယ်ငှား ⦿ ရုပ်ရှင်ကြည့် ⦿ သီချင်းနားထောင် ⦿ ပိဋကတ်တရားနာ ⦿ စားစရာမှာ ⦿ အိမ်ခြံမြေ ⦿ ဥပဒေ ⦿ အဘိဓာန် ⦿
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုသည် အာရပ်ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။
ဗီဒီယို။ တစ်လလျှင် တန်ချိန် ၃၀၀။ ကိုရီးယားတွင် မင်းမျိုးမင်းနွယ်ခြေထောက်များအတွက် အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သည့်နေရာ။ နံနက် ၃ နာရီမှ ပြုလုပ်သော ဝက်သားခြေဖဝါး၊ Bossam Meat Factory┃ အကြီးဆုံးသော ဝက်ခြေကျင်းများ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ။ – ကိုရီးယားချက်နည်း
ယူကရိန်းမှာ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပြီး အနည်းဆုံး နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘တန်ရှန်အမျိုးသမီးတွေ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ’ – ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်က အဖြေပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
မင်းသားချားလ်စ်သည် ရဝမ်ဒါတွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကို တွေ့ဆုံခဲ့သည်။